Chigadzirwa huwandu-Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd
Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd., ikambani yejoint-stock yakavambwa muna 2004. Abutting kuNingbo Airport neNingbo seaport, inopa kurerukirwa kukuru kune zvese zviri zviviri traffic uye zvekufambisa. Iine pasi nzvimbo inenge 47, 000 sq. Mamita uye nzvimbo yekuvaka ye 40, 000 sq. Mamita, fekitari yedu ine vashandi vanopfuura zana (vanopfuura 100 technicians) uye anopfuura 10 akasiyana-siyana michina.
Aimbove akatumidzwa naNingbo Hengda Metal Products Co., Ltd., yakavambwa muna 1984, Innopower Hengda yave mugadziri anotungamira weakasiyana ekupisa uye midziyo yekubikira, zvinosanganisira gasi patio hita, gasi barbecue grills, indoor uye kunze gasi hita, gasi firepits (gasi. nzvimbo dzemoto), zvitofu zvegasi, zvinopisa gasi, kit yekubikira (turkey kit), crossbow, Broadheads nezvimwe.
Iyo kambani iri ISO9001 uye BSCI fekitori yekuongorora. Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvinotenderwa neEC, AGA, CSA, SANS zvitupa. Kufarirwa nemhando yepamusoro uye mutengo wemakwikwi, isu takazvipira kune isingaenzaniswi hunyanzvi uye sevhisi kune vatengi vedu kubva kumba nekune dzimwe nyika.
Kugadzirwa kwemhando yepamusoro pachiyero
Kiyi yekubudirira kwedu kwekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro inogara mune-ye-the-art maitiro ekugadzira uye zvivakwa pamwe nevashandi vane ruzivo.
400+ akasiyana michina inosanganisira 2sets laser yekucheka michina
30,000+ heaters & BBQs / Mwedzi
25years 'chiitiko Gamuchira OEM, ODM zvigadzirwa zvitsva
Kukurumidza zvigadzirwa zvitsva sampling
CNC workshp & Laser yekucheka muchina
Burner Test Uye Assembly Line
Nyaya yedu 1
Muna 1984, VaYang vakanga vatanga bhizinesi rekugadzira zvidimbu zvepamuchinjikwa mumhuri yavo mumusha weDongyang, vaine vanhu gumi chete.
Nyaya yedu 2
Makore iwayo, bhizinesi rekambani rakakura zvakanyanya uye nekukurumidza.
Muna 2000, Ningbo Hengda Metal Products Co., Ltd yakavambwa. Kuti zvive nyore zvekufambisa, fekitori yakaendeswa kunzira huru yemusha weDongyang, padivi peS34 provincial road, ine vashandi vangangosvika makumi masere.
Nyaya yedu 3
Mugore rimwe chetero, pakupedzisira, Ningbo Hengda akange apedza kutsvagisa nekuvandudza kweyekutanga patio hita yekunze uye akapinda muindasitiri nyowani yemagetsi egasi.
Nekukurumidza kuwedzera kukura, muna 2004, Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd yakavambwa semubatanidzwa.
Mugore rimwe chetero, yekutanga CE uye mvumo yeAGA yakawanikwa.
Nyaya yedu 4
Muna 2008, kekutanga, Ningbo Innopower akanga ISO9001 certified.
Muna 2015, fekitori yakasimbiswa neBSCI.
Kusvika parizvino, tinotengesa nyika dzinopfuura makumi masere neshanu pasirese uye tine vatengi makumi matatu nevashanu vakatoshanda nesu kwemakore anopfuura gumi nemashanu.